I-Rocky Point Hut, indawo yothando kunye ne-adventure - I-Airbnb
I-Rocky Point Hut, indawo yothando kunye ne-adventure
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguDanielle & Hayden
Thatha uhambo oluhle phezu kweSiqithi sasePepin kwaye ukonwabele ukubukeka okuhle kweCable Bay kunye neTasman bay endleleni. Imiswe phakathi kweKanuka yasemthonyama kunye namatyholo aselunxwemeni aseNew Zealand, emi eweni yiRocky Point Hut. Hlala ubusuku obuthile kwindlwana entle neyabucala enendawo yokhuni ekhululekile kwaye uthathe zonke iimbono ezimangalisayo. Chitha ixesha lakho uphumle kwaye uziphathe kwindawo yokuhlambela eshushu yangaphandle ngombono wepanoramic phezu kolwandle i-Abel Tasman. Isetingi egqibeleleyo yokurhoxa kwezothando.
- Ibhedi elala abantu ababini
- Ukuhlamba ngamanzi ashushu elangeni (nceda uqaphele ukuba kwiiveki ezinezimvula, amanzi ashushu alinganiselwe - kukho igesi enamanzi ashushu aphumayo xa kungekho ilanga elaneleyo)
- inyama eyojiweyo kunye nento yokupheka igesi
- Ifriji encinci -
Iindawo zokuhlala zangaphandle
- Ikhitshi kunye nezinto zokupheka
- Ebusika, isenokuba yintlanzi kodwa siyaqinisekisa ukuba kukho izinto zokondlula ibhedi namanzi ashushu ezininzi!
- Ukuhamba ngeenyawo phakathi kweyure eyi-1 ukuya kweziyi-2, iinduli
ezinyukayo - Abantu abadala kuphela - cela ukuba umntwana (ubungozi kwiinduli)
- Kulala abantu ababini
- Ukuzenzela ngokwakho ngaphandle kokuba wenze uphando lweenkonzo zokutya:
- Ukulandelelana kokutya. Sithumelele nje uludwe lwakho oluneenkcukacha kwaye siza kwenza ukutya kwinqweno ilungele ukufika kwakho. Imali yerisithi eyi- $ 40 +
- Isidlo sakusasa esilula, i-muesli, ubisi, i-yoghurt kunye nezinye iziqhamo zexesha elithile $ 10 pp/kusasa. (iinkonzo zetshizi kunye nesidlo sakusasa zibanjiwe ngoku ngenxa yemigaqo ye-covid)
I-Rocky Point inobuncinane beentsuku eziyi-2 unyaka wonke, kodwa ke usenokukwazi ukubuza kusuku olunye ngaphambi nasemva kokubhukisha. Sinezinye iindawo ezimbini ezikhethekileyo phantsi kwezindlu ezahlukeneyo, iPassage Hut ne Nikau Hut.
- Umboniso weenja kwiigusha ezimele zenziwe
- Ixabiso kumbuzo
Ukuba ufuna ilifti eya kwinqugwala, sineendlela ezine zokuphakamisa ezikhoyo. Oku kubiza i- $ 60 kuhambo olunye.
Kufuneka izinga elithile lokuzilolonga njengoko kukho iinduli ezinyuka kakhulu.
Nceda uthumele umyalezo kwinto ongathanda ibe siza kuyenza ikusebenzele!
4.93 · Izimvo eziyi-271